विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ करोड ६७ लाख नाघेको छ । संक्रमितहरु मध्ये ६० हजार बढीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ । कोरोनाका कारण विश्वमा हालसम्म ८ लाख ७८ हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
यस्तै कोरोना संक्रमितमध्ये एक करोड ८८ लाख ७९ हजार व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन् । विश्वमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ७० लाख १४ हजार रहेको छ ।
चीनको हुवाइ प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्त्यबाट शुरु भएको कोरोना संक्रमणका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
अमेरिकामा ६३ लाख ८६ हजार जना कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये ३६ लाख ३० हजार कोरोना मुक्त भएका छन् भने १ लाख ९२ हजारको मृत्यु भइसकेको छ ।
ब्राजिलमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४० लाख ९१ हजार पुगेको छ भने ३२ लाख ७८ हजार कोरोना मुक्त भएका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख २५ हजार पुगेको छ । यस्तै भारतमा कोरोना संक्रमणको दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
भारतमा अहिलेसम्म ४० लाख २० हजार संक्रमित रहेकोमा ३१ लाख ४ हजार कोरोना मुक्त भएका छन् भने ६९ हजार बढीको मृत्यु भएको छ । रुसमा १० लाख ९ हजार संक्रमित रहेका छन् । यी मध्ये ८ लाख २६ हजार कोरोना मुक्त भएका छन् भने १७ हजार बढीको मृत्यु भएको छ ।एजेन्सी
काठमाडौं, २० भदौ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनेका विराटनगर महानगरपालिका घर भएका दुई जना महिलाको मृत्यु भएको छ । उपचारका क्रममा एक जनाको विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र एक जनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको हो । कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाको भने शनिबार बिहान ८ बजेतिर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिए ।
स्वाब संकलन गरेर प्रदेश १ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणपछि मृतकमा भदौ १७ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोना देखिएपछि न्युरोबाट रेफर गरिएकी महिलालाई भदौ १८ गते बिहीबार बिहानदेखि प्रतिष्ठानमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको थियो । डा. सापकोटाले मृतकको शवको व्यवस्थापन नियम अनुसार गरिने जानकारी दिए । हालसम्म प्रतिष्ठानमा उपचाररत २२ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ ।
हुम्लामा विभिन्न प्रकारका विपदबाट तीन करोडभन्दा धेरैको क्षति